Wheelsdị ụkwụ G dị mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > G rim - esi eme ihe
G rim - esi eme ihe
Wheelsdị ụkwụ G dị mma?
KwaG akaraOmenalawiila na-eme nke ọma maka ịrụ ọrụ siri ike n'ụgbọala, ụgbọala, na SUV taa. Obi ike ma na-akpali akpali, set nkeG akaraomenala tunerwiilsite na Marquee bụ aukwutozọ iji tinye mmetụ nke mmadụ n'ụgbọ ala egwuregwu gị, sedan dị n'etiti, ma ọ bụ crossover SUV!
Ọ bụrụ n’ile edemede a, ị dị ka m mgbe m dị afọ iri na isii. Wantedchọrọ ịchọpụta ihe mbụ wiil ụkwụ gị kwesịrị ịbụ maka ụgbọ ala gị. Ka ọ dị ugbu a ị nwere ike ịga na ibe Facebook, yana weebụsaịtị na ọgbakọ dị iche iche dịka afọ 10, ma eleghị anya ị nwere ajụjụ karịa azịza mgbe, ị mere nyocha gị.
Oge ụfọdụ ndị mmadụ anaghị aghọta nghọta nke dayameta, obosara, mbibi, agba na ihe ndị ahụ niile, ma a bịa n'ịzụrụ ụkwụ ụkwụ mbụ gị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịrapagidesi ike na ụkpụrụ bolt, ọtụtụ n'ime ya nwere ike na-agbagwoju anya. Ọfọn isiokwu a agaghị abụ maka ọtụtụ ndị ọkachamara nọ ebe ahụ. ndị na-arụ wiilị akụkụ atọ na ihe ndị yiri ya.
Nke a bụ maka ndị mbido gị nọ ebe ahụ na-achọ ịzụta ụkwụ ha nke mbụ. Ya mere, Abụ m Alex si Fitment Industries na anyị ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ banyere ihe ịmara tupu ị na-eburu igwe mbụ gị, ihe mbụ ị ga-atụle mgbe ị na-azụ ụkwụ wiil bụ ụdị taya ị ga-eji . Ugbu a, anyị agaghị abanye n’ụdị ụdị taya ị kwesịrị ịnya, mana ihe kachasị mkpa ịcheta bụ na ọ bụrụ na ị na-azụ ụkwụ wiil mgbe azụ, ị ga-enwerịrị ike ịnwe taya.
Anyị na-enweta ọtụtụ ozi ịntanetị site n'aka ndị chọrọ ịzụta otu wiil ma ha chọrọ iji taya OEM ha jiri wiil OEM ha. Ya mere, n’ikpeazụ ị gafere otu 215-55-17 ma juo anya ihe mere igwe kwụ otu ebe adịghị ka egwuregwu dị ka egwuregwu igwe gị mgbe ị rụsịrị. edozi ma wụnye.
Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-azụ ahịa maka wiilị ahịa, ịchọrọ iji taya na-agba ọsọ. Nkwado anyị na-emebu bụ ịrapagidesi ike na akụkụ 40. Dị ka taya na sistemu metric niile na-arụ ọrụ maka ha, ị mara mma nwere ike ịnara ya: Nọmba Ree na-anọchite akụkụ atọ dị iche iche nke taya ahụ.
Nọmba mbụ bụ obosara ma ọ bụ traction ụzọ na millimeters nke taya na nke a bụ ihe ga-akụ n'ala. Nọmba nke abụọ bụ akụkụ gị. Ya mere, nke ahụ bụ anya na sidewall ogologo, na ọ bụ ná nkezi ruru gị ngụkọta obosara na traction ụzọ nke taya.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere 225/40, pasent 40 nke 225 bụ akụkụ mgbidi gị n'akụkụ. Ma mgbe ahụ n'ezie nke ikpeazụ ọnụ ọgụgụ gị wheel dayameta, ma ọ bụrụ na i nwere a 225/50/17 wheel nke a bụ ezi maka a 17 inch anụ ọhịa. Na sportier taya na ihe ndị dị otú ahụ, ị ​​nwere ike na-enwekarị ndị anya na ị chọrọ maka gị mbụ set nke wiil, ọ bụghị naanị site ịzụ mgbe-ahịa wiil, kamakwa site ịzụ mara ezigbo ezigbo ala-pro taya.
Ọ na-abụkarị otu akụkụ nke 40 ga-arụ ọrụ ahụ, yana ọ bụrụ na ị na-achọ taya taya, anyị ga-atụ aro ka ị gbalịa idobe ihe nwere aha dịtụ mma karịa naanị isi gị, ọkwa ntinye, nke dị ọnụ ala ị zụrụ nwere ike. Taya bụ ihe jikọtara gị n'okporo ụzọ. Yabụ ọ bụrụ na ịdị ọnụ ala na taya na ị na-emefu nnukwu ego na wiil, ị na-efunahụ ebe mgbanwe niile, yabụ anyị na-atụ aro iburu ọnụ ahịa abụọ a n'uche ma hụ na ọdịdị ịchọrọ bụ lee anya ichoro.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ nke taya dabara nke rim size, anyị nwere a gallery maka na. Nwere ike ịlele ha na fitmentindustries.com/gallery ma banye ụdị nkọwa taya na oke akụkụ ịchọrọ iji yana ihe ndị ọzọ na-agba.
Nke abụọ ihe ị chọrọ mgbe ọ bụ gị na nke mbụ ịzụrụ wiil na taya, dechapụ dị mkpa, ma dabara bụ (akụ aka) dị mkpa-uh. Ihe kachasị mkpa anyị hụrụ ọtụtụ ma anyị na-enweta ozi ịntanetị site n'aka ndị zụtara igwe kwụ otu ebe anyịnya igwe nke mbụ, ha hụrụ StanceNations Instagram ha wee sị 'wow' nwoke a na-agba ọsọ 19 ugboro 1 site na 0 adịghị mma 12 offset -Wheels na achọrọ m ịgba ịnyịnya the same same setup, kedu ka m ga esi eme ya? 'Ma mmefu ego ha bụ ihe dị ka $ 600 ma ha enweghị echiche mgbanwe fender ma ha chọrọ ka ihe niile daba n'okpuru ahụ ma ọ bụghị mkparịta ụka na-atọ ọchị. Mgbe ị na-azụ ụkwụ gị na taya mbụ gị, anyị na-akwado idebe ihe ka mkpa.
Ijide n'aka na ị ghọtara ihe ndị bụ isi nke wiil na taya ga-adị ezigbo mkpa karịa na ị ga-enweta nha na obosara ya na nkwụsịtụ ziri ezi ma ghara ịnwe ọtụtụ n'ime, nke ọma, ụzọ aghụghọ nke na-abịa ọtụtụ- akụkụ wiil ma ọ bụ n'elu fenders ma ọ bụ a dum ahu gaa jikọọ Mgbe imeghari mgbe-ahịa wiil na ya. Ozugbo ị banyere n'ime ihe ndị siri ike banyere mgbatị na taya azụ ahịa, enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ monoblock forged, ụdị ụdị wiil na ụlọ ọrụ na-enye wiil ndị ahụ na ihe niile dị n'etiti.
Na mkpokọta, nkwanye anyị bụ iji ihe nwere mmesi obi ike dabara na nke ị nụrụ ebe a. I juputara na (mkpọtụ) M nwere ike ịhụ nsị na-apụta n'ọnụ gị. (mkpọtụ) Nkwado anyị bụ ịmalite site na ịnyịnya ígwè na taya ndị nwere ezigbo ndokwa akwadoro dabara na n'ihi na na njedebe nke ụbọchị, mba, ịgaghị enwe ike ịgba ọsọ 19 x 11 0, ma mara, bụrụ otu nke ụmụ nwoke dị jụụ na Instagram mana ị nwere ntọala dị ọcha nke na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ, ị gaghị echegbu onwe gị maka mgbanwe ndị bụ isi dị ka ịkpụchasị ígwè na ịgbanye fender, ịtụgharị na ịhịa aka na ihe niile dị n'etiti. ị ga-enwe ike ịga ihe karịrị kilomita 50 n’enweghị ihe ga-akpata ya.
May nwere ike ịnọ na-eche ebe nkwụnye ahịa dị, ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ikike ga-eso ụgbọ ala gị, gwa ndị ziri ezi. Fitmentindustries.com, (mgbịrịgba ụda) anyị nwere ozi niile a.
Nke a bụ oge ikpeazụ m ga-ekwu nke a, mana ị kwesịrị ịchọpụta ugbu a na anyị na-anwa ịnwe inyere gị aka na The First Set of Wheels and Tares. (ịfụ rasberi) Ihe nke atọ ị kwesịrị ịtụle bụ ụdị mmasị. Ọ bụrụ na ị nọ ebe ahụ ugbu a enwere mmasị dị ukwuu na ụkwụ, ọkachasị mgbe ị banyere n'obodo mgbago na-agafe agafe na-enwe ọtụtụ ndị na-eso ndị na-emepụta wiilị dịka ọ bụ egwuregwu ịchọrọ ijide n'aka na onye ọ bụla maara etu akwa ndị a na-emepụta igwe kwụ otu ebe bụ.
Mgbe ị zụrụ ụkwụ nke mbụ ị gaghị enwe ahụmịhe ma ghọta akụkọ ihe mere eme nke ọtụtụ ndị na-emepụta wiilị ndị a, n'ihi nke a, ọtụtụ mgbe ndị mmadụ nwere ike ịzụta wiil nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kacha mma, sie ike, ma ọ bụ kacha adaba n'ihi na ụgbọ ala ha na-. Ihe bụ isi ị chọrọ ịghọta bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ilekwasị anya na mmasị ụdị, ọ na-agbadata n'ihe ịchọrọ. Enwere ọtụtụ nhọrọ, ma ị na-achọ ihe na-atọ ụtọ karịa ihe dị fechaa ma ọ bụ na ị na-achọ ihe ga-enwe ọtụtụ nhọrọ agba dị iche iche na-emegide ma eleghị anya ọ bụ naanị igwe ojii gị dị larịị.
Ihe kachasị mkpa ị ga-atụle mgbe ị na-eme wiil bụkwa taya gị. N’ezie, anyị emetụla aka na mbụ, achọkwara m imetụ ya aka ọzọ, n’ezie, mgbe ị zụtara igwe kwụ otu ebe a, mgbe ịzụrụ ha maka $ 1,000, ị na-echeba n’eziokwu na ị na-etinye ụfọdụ taya on ọjọọ ụmụ okorobịa kwa nwere, na ị ga-achọ ijide n'aka na ị bụghị a dịghị-aha taya. Otu ihe a na-aga maka igwe kwụ otu ebe.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-anwa ịnọ na mmefu ego, ọ pụtaghị na ị ga-enwerịrị ike ịgba ịnyịnya ígwè. E nwere otu ụdị nke wheel ndị si n'ebe ahụ nwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụgbọ ala kachasị ewu ewu nke ọtụtụ ndị ọhụrụ ga-achọ ịzụta. Echere m Subarus, Mitsubishis, Hondas, ihe niile.
A ga-enwe ọtụtụ ndị na-emepụta wiil na-eje ozi na ahịa a. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịdebe ihe n’okpuru otu puku dọla, anyị nwere akụkọ na-ekwu maka ya, mana n’otu oge Konig ga-abụ otu nnukwu nhọrọ ma ị na-achọ nhọrọ ntụgharị. Rotiform nwere ụfọdụ wiil dị ukwuu na-abịa n'ọtụtụ stylings dị iche iche, Cosmis Racing, nnukwu egwuregwu kọmpat wheel.
ESR nke na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe, ọ dịkwa ọtụtụ ndị ọzọ nọ ebe ahụ dịka 3SDM ma ọ bụrụ na ị na-achọ karịa ka ị na-emegharị wiilị Euro. n’etinyeghi ego. Otu ihe ahụ na-aga na taya.
Ihe nke anọ ị ga-ebu n’isi, ma ọ bụ mụta ihe, bụ ịghọta ihe ndị na-eme n’ịgbagharị na ihe o kwuru dabara n’ụgbọala gị. Enwere ọtụtụ ihe dị iche iche ga - enyere gị aka ịmata nke ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ele anya na dayameta ọ kwesịrị ịdị mfe, nke a bụ dayameta nke wiil gị.
Ọ bụrụ na i lee ihe akara dị n’etiti anya, ọ ga-adị ma ọ bụrụ na wiil gị agbajie n’etiti. Ọ ga-abụ na anya n'etiti gị center akara na gị arịọnụ ehiwe elu, ọma, ebe gị wheel ga-n'ịnyịnya n'ezie. Ọ bụrụ na ị nwere ugbu a nti dechapụ wheel, arịọnụ elu ga-abụ na uzo nke n'ihu nke mkpokọta wheel.
Nke ahụ pụtara na wiil ndị ọzọ na-agbanye n'ime fenda ahụ. Ugboro oge ị ga-ahụ wiil dị elu na ihe ndị dị ka Corvets na, nke ọma, Lamborghini maka ihe nwere obere ntụpọ ma ọ bụ ntụpọ efu, ị ga-ahụ nrịgo arịgoro arịgoro n'ihu n'ime wiil ahụ. Ihe na - eme bụ, wiil ndị ọzọ dị na - agbazigharị agagharị, ọ ga - eme ka wiilị nke ọzọ pụọ na fenda.
N'ihi na nke ugbu a na ọnọdụ, ala dechapụ wiil aghọwo nnọọ ewu ewu na ị ga-ahụ a ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ịnya ụgbọ wider na, nke ọma, dị ka ala na-akwụ ụgwọ dị ka o kwere. Ma cheta na dechapụ enyi na enyi bụ a funky nọmba. Ka ị na-eru nso na efu, a ga-emegharị wiil ahụ n'ihu.
O doro anya na ọ bụrụ na ị na-ele anya dị iche iche dị iche iche enwere wiil ndị na-enwe nsogbu mgbe ụfọdụ, ịmara, wiil azụ. ma ọ bụ nnukwu ezumike ngwa nwere ike ịchọta na ọtụtụ dị iche iche ugbo ala. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị oke oke oke iwe, nke ahụ dị mma.
Enwere usoro mgbanwe maka ọmarịcha ụgbọ ala ọ bụla, ọtụtụ dị n'agbata 35 na 50 sentimita, yabụ ọ bụrụ na ị nọ nso dịka o kwere mee ịmegharị wiilị maka ụkwụ ụkwụ gị nke mbụ, rapara na 35 millimeter Offset ndị a ma ị kwesịrị ịdị njikere tụgharịa. Mana ọ bụrụ na ịga n'ihu ma tinye ya n'ihe ize ndụ maka kuki ma ịchọrọ ịnwa iwe, ihe niile ị maara bụ na ị nwere ike ịdaba na nsogbu. Na mgbe ị na-azụ gị mbụ wheelet, anyị na-atụ aro na ị na-ezo aka azụ ka n'ọnụ ọgụgụ abụọ na dị nnọọ na-egwu ya mma, na-eme ka n'aka na ị na-aga na ihe na-ekwe nkwa dabara.
Ihe nke ise na nke kachasị dị mkpa icheta mgbe ị na-azụ ụkwụ mbụ ị nwere ike ịbụ nke dị mfe karịa ha niile: echela naanị. Enwetara m ya, echetara m na m dị afọ 16. na ịchọrọ ịga, na ịchọrọ ịtụtụ igwe, ka ị banye n'ịntanetị, mee nyocha gị, gbalịa chọpụta ihe dabara, ị hụ onye ị na-amaghị onye ọ bụ , dee ụdịdị ha, na ụdị ịmara ihe nkwụghachi bụ agbanyeghị na nkwụghachi na nkwụghachi azụ abụghị otu ihe.
Ma mgbe ahụ ị ga-apụ ma chọta wiil ndị ahụ na nkọwapụta ahụ kpọmkwem, yabụ na ị na-enye ha iwu, mana ị ga-amata na ị nweghị taya ọ bụla maka ha, yabụ ị ga-amalite ibugharị taya ahụ site na wiil OEM gị gaa na wiil na-ezukọta. mgbe ahụ ị na-etinye ha, mgbe ahụ ị ga-edozi ha wee chee, 'Oo chim chefuru m inweta' oche ndị akpakara n'ihi na ụkwụ ọhụrụ ndị a adabaghị na nke m, ị maara, OEM wiilị, ha abụghị otu, yabụ na ị ga-enwerịrị onwe gị wiwi ma ọ bụ wiilị ọzọ, wee chọpụta na Advance Auto Parts na ị gaghị enwe ike ikpebi ihe na - eme ka ị laghachi ụlọ ahịa ahụ ka ịdebe ya niile wee chefuo na ị ga-enweta TPMS n'ihi na, nke ọma, ụgbọ ala gị ka ọhụrụ karịa 2008 yabụ chefuo inweta TPMS yabụ ịkwesịrị ịwụnye TPMS tupu i tinye taya ahụ, yabụ tinyezie taya ahụ, wee banye ha n'ụgbọala gị, ma ị gafee ile ụgbọ ala gị anya, ị na-enwe nnukwu ọ becauseụ n'ihi na ị nọrọ n'oge a niile, ị nọrọ w eeks na izu na izu ịkọwapụta ihe ndị a niile na ha adabaghị n'ihi na ha kụrụ ụkwụ. Ọ na-eme ma ọ bụrụ na ị maa. Nke ahụ na-emekwa ọtụtụ mmadụ.
Anyị na-ahụ ya n'ọtụtụ ozi ịntanetị, M na-ahụ ya na forums mbụ setịpụrụ wiil mgbe niile, ọ na-amịkwa. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwetara ya na-ezighi ezi. Naanị echela.
Enwere ndị dị ka anyị, nke ahụ bụ ihe anyị na-eme, anyị chọrọ ijide n'aka na ị zụrụ wheet kwesịrị ekwesị n'oge mbụ n'ihi na ọ naghị eme ka ndụ dịrị onye ọ bụla mfe ma ọ bụrụ na ịghaghachi ihe ma ọ bụ na ị zụrụ ihe ọjọọ. Nkwado anyị bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ị bulie otu wiil na nke a bụ oge mbụ gị, zitere anyị ozi, zitere anyị ozi, ma ọ bụ gwa anyị okwu na wiil na fitmentindustries.com.
Ma ọ bụghị ya, jiri weebụsaịtị anyị. Enter banye n’afọ gị, mee ma maa atụ, ọ ga - agwa gị kpomkwem ihe ga - adabara ụgbọ ala gị. Nke ahụ ọ bụ ntakịrị ahịa ere? Kpamkpam ndị mmadụ.
Agaghị m agha ụgha banyere ya, mana nke bụ eziokwu bụ na anyị na-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ịzụrụ ụgbọ ịnyịnya ígwè mbụ ha na anyị ga-ede edemede dị ka nke a iji nwee olileanya na unu ghọtara na ọ dị ọtụtụ karịa naanị ịtụtụrụ elu otu ụkwụ wiil. Karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ya nke ọma na nke mbụ ya. Ya mere, anyị nwere olile anya na ị masịrị ya, nke a bụ ọzọ maka ụmụ okorobịa anyị ịzụrụ ụkwụ mbụ ha.
Nke a abụghị maka ndị ọkachamara si ebe ahụ. Naanị ihe anyị chọrọ ịnye gị ndụmọdụ ole na ole iji zụta wiil mbụ gị. Yabụ, anyị nwere olile anya na ị masịrị ya, echefula ịdenye aha na n'ezie m Alex si Alex Fitment Industries, m ga-ahụkwa gị ma emechaa.
Kedu ụdị akara kachasị mma maka rim?
Lee ụfọdụ n'ime hakacha mma rim ụdịmaka 2020:
ENKEIAkpụkpọ ụkwụEnkei ka aikabukacha mmamara maka fechaa harimma na-ahụkarị onwe ha nson'elunke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahịa ọ bụlarim ika kacha mma-nke ndepụta.
OZ Rgba ọsọAkpụkpọ ụkwụ.
Eprel 8 2021
Ngọnarị! Ndị a abụghị ọkacha mmasị anyị nke onwe anyị ma a bịa n'azụ wiil azụ. Ndị a abụghị wiil kachasị mma n'ebe ahụ. - Ọfọn, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịbụ. - Ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịbụ ọnọdụ ụgbọ ala n'ime Afọ 2020 maka ọtụtụ akụkụ - - Ebe ọ bụla.- Otu esi egosi n'ụgbọala --- Ihe ngosi onwe. - Na ụgbọ ala na-egosi - All na ezi stof - Ya mere, nke a bụ n'elu 20 ndepụta nke ndị kasị ewu ewu na anyịnya igwe na 2020 - N'afọ gara aga, anyị nwere ụfọdụ-acha anụnụ anụnụ smoothies ndị a bit - mean pụtara otú? - ya mere? - Ọ dị mma, ị maara mmega ahụ. - Wheels, taya, nkwusioru. - Fitmentindustries.com Baby Echere m na anyị kwesịrị ịwụli ozugbo na ndepụta igwe kwụ otu ebe wee bido ebe a. - Kpamkpam, na dị a ngwa ngwa dee, ọ bụla igwe kwụ otu ebe e kwuru okwu na ndepụta a dị na fitmentindustries.com ụlọ ọrụ, echefula ịdenye aha, ka anyị nye igwe kwụ otu ebe mbụ - Yabụ na mbido anyị nwere nọmba 20, ụgbọ mmiri Kansei-Frickin .
Ọ dị mma, ụlọ ọrụ a na-amasị m. Ha na-eweghachite atụmatụ JDM ụlọ akwụkwọ ochie. - Kpamkpam. - Na Tandemis bụ otu n'ime ndị ahụ mara ezigbo mma igwe kwụ otu ebe.
Ọ nwere oke iwe, ezi concavity, ma dabaghị ngwa ọ bụla, mana ndị ọ dabara na ya dị ezigbo mma. Na ihe mere na ọ bụ na ọnụ ọgụgụ 20 bụ Kansei bụ a mara mma ọhụrụ ika. Dị ka a ga - asị na ha adịbeghị ọhụụ, ha apụọla ihe karịrị otu afọ ugbu a - Ọ gaferela otu afọ ugbu a.
Ha na-asọpụta ụdị wiil, a haziri ha nke ọma. Tandem na-adabere n'ụgbọ ụkwụ ụdị GTR dịka R34 na ndị dị otú ahụ. Ezigbo mma igwe kwụ otu ebe. - Gaa na nke na - esote na 19 anyị nwere Aodhan DS02.
Ugbu a, nke a bụ wiil nke na-enye egbugbere ọnụ miri emi, otu nkedo nkedo, nke na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ siri ike nye onye ọ bụla nọ mgbe 350Z gasịrị, Genesis Coupe, ma eleghị anya ọbụna dịka Widebody FRS. na-achọ 'ájá dị ka nke ahụ. Ha bụ wiil awara, ha sara mbara nke ukwuu, ha dị oke ọnụ. - Kpamkpam ọnụ. - Ha na-enye ezigbo ụdị, ị nwere ike iji ha nweta ụdị akụkụ a. - Ị mara.
Ọ bụ igwe kwụ otu ebe na ọ bụ ya mere o jiri nwee listi. - Kpọmkwem. - Ọ dị mma, gịnị bụ nọmba 18? - Ya mere, iji nweta ọnụ ọgụgụ 18, enwere m otu akara nke ụdị ahụ, Rotiform RSE - Ọ dị mma, ọ dị mma.
Have nwere ụfọdụ ndị nlele VIP na ha? - Enweghị Rotiform BLQs, enwere m em na ụgbọ ibu ahụ. Agbanyeghị, RSE bụ nhọrọ mara oke mma site na Rotiform. Ndị a bụ wiil ị ga - enwe ike ịnụ ọtụtụ ihe na ndepụta ndị a, mana wiil ndị a na - ele anya na ihe ọ bụla. - Kpamkpam. - Ma ọ bụ ya mere ị ga - ahụ ka ha na - abịa mgbe mgbe na 2020 - Ha nabatakwara Aerodisk, ọ kwa? - Ee, yabụ nke ahụ bụ ihe dị mma maka ya n'ihi na ha nwere ihe a na-atụ egwu nke na-ezobe mkpụrụ ụkwụ.
Ọ bụghị mkpọchi etiti, ọ bụghị ka ọ dị otu a, naanị ya kwesiri ikpuchi mkpịsị ụkwụ ụkwụ wee nye ya anya dị ọcha. Mana ihe dị jụụ bụ na ị nwere ike ime Aerodisk na ya, nke ahụ na-enyekwa gị ọtụtụ nhọrọ ị nwere ike ịhazi. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana Rotiform RSEs bara ezigbo uru, ị nwetara aha Rotiform ahụ.
Ha mara ezigbo mma na mpaghara ndị a abụghị naanị Rotiforms emere maka Volkswagen. Ahụla m ihe ndị a na Mustangs na ihe niile dị n’etiti. - Ha dịkwa ka otu puku dollar. - Kpọmkwem, ibu jụụ. - Cool, ya mere ka anyị gaa nọmba 17, anyị nwere igwe kwụ otu ebe nke abụọ site na Kansei.
Eleghị anya ndị otu ewu ewu na otu ahụ bụ Kansei KNP. Ọ bụ ọla kọpa ọla ise Patrick na onye ọ bụla na-ajụ maka ya n’edemede ọ bụla, yabụ nke ahụ kachasị ewu ewu na Kansei. - Ee, ọ bụ ihe dịka ụgbọ ụkwụ ha. - Kpomkwem, ọ bụ ha flagship -Wheel.
Ọ bụ ọla kọpa na a dope udidi na ọ na-abịa. Ọ dị na ọlaọcha na a gbara ọchịchịrị gunmetal isi awọ. - Ọla kọpa na-ele anya dị egwu. - Ọla kọpa mara ezigbo mma.
O nwere ike ịbụ ọkacha mmasị m n’otu ahụ. N'ihi ya, ọ bụ a na-ụdị-wheel ọzọ. Dịtụ ọnụ.
Ihe ruru otu puku, narị dollar iri na otu, dabere na nha ị chọrọ. Ha na-eme ihe ike ike na mmebi iwu ha Ya mere, ha kwesiri ka nọmba 17 dị na ndepụta ahụ - Ọ dị mma, ya mere na nọmba 16, anyị nwere Fifteen52 Turbomac, na nke a dakwasịrị m nke ọma? Ngwa mgbado anya, gia elekwasi anya, ima ihe m na ekwu? Usoro ise nke 108 nwere ike ịbụ ntakịrị ihe (beeping), ọ dị mma? (ọchị) Ya mere, ihe dị mma banyere ika iri na ise ahụ bụ na ha na-enye ise site na 108, yabụ ị ga-ahụ ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na Focus STs. Ma ha na-eso ọtụtụ ihe ndị ọzọ aga.
Ahụla m ọtụtụ oge na Mini Coopers na hatchbacks. Ha bụ ntakịrị ihe ngosi nke mmụọ nsọ sitere n'ike mmụọ nsọ, ha nwere nke ahụ, apụtaghị m ịkọwa ntupu, mana ọ bụ okwu na ntupu na ya. Ọ dị iche, ọ bụghị maka mmadụ niile.
Mana ọ bara oke uru na obodo hatchback, m ga-ekwu nke ahụ. - Iji gbadaa nọmba 15, anyị etinyela Cosmis Racing na ngwakọta na-enweghị onye ọzọ karịa XT-006R. - Ọ dị mma. - Ugbu a, nke a bụ nke isii kwuru imewe na ezigbo nzọụkwụ egbugbere ọnụ kasị mma nke ụwa abụọ ebe a.
Ọ dị mma maka ịkụ egwu breeki, ihe niile dị mma. Ọ bụ a siri ike isii-okwu wheel, abịa na a ọnụ ọgụgụ nke ezi na agba na Cosmis mara maka. - Ee, ọ kachasị uhie. - Ee, inwere.
Enwere m ọla kọpa, ị nwetara uhie, ị nweta ọlaọcha, ọcha, nwa, chrome ojii, ihe ọ bụla o nwere. Mana ha ruru nha dị mma nke ukwuu, ezigbo iwe iwe, agba agba. Na ezigbo ọnụahịa otu narị dọla kwa - Nweta ya, ee.
Ọnụ ọgụgụ nke iri na anọ, ka anyị si n ’ebe a pụọ ​​- ọnụahịa. - BBS LM. Ya mere, nke a bụ ibu kpochapụwo imewe.
Ihe mere o jiri debanye aha ya bụ maka igwe kwụ otu ebe a enweghi oge. - Kpamkpam. - O yiri ka ọ dị oke mma.
Ihe mere na ọ bụghị elu bụ na ọ bụ ọnụ (beeps). Ihe m na-ekwu bụ na agaghị m agagharị n’ọhịa ebe a, ọ dị oke ọnụ. Ma ị na-akwụ ụgwọ maka mma.
Get nweta ogo BBS, na LM dị ịtụnanya. Ọ bụ otu n'ime igwe kwụ otu ebe ole na ole na ndepụta a.- Ee.- Ma ọ bụ naanị ihe ịtụnanya.- Ọtụtụ ndị mmadụ na - amalite iburu ha ọzọ. - Ee, ee, ha na - alaghachi. - Ọtụtụ mmadụ na-achọ ụdị okike a.
Ha na-ekwu, 'Achọrọ m wiilị BBS,' olee wiil ọzọ karịa LM? .I nwere ike ị bulie ha na nha ị chọrọ. Ihe ọ bụla ị chọrọ. - Ka a pụọ.
Ma mgbe ahụ ị bịara ọnụ ọgụgụ 13 - Oh chi, ihe ọjọọ iri na atọ - Nhọrọ ụlọ nyocha 716, R716. Nke a bụ Rad Nke a bụ ihe ama ama, na obodo WRX, FRX na BRZ. Karịsịa n'ihi nha ha nwere.
Ha anaghị eme ọtụtụ nha, ha enweghị ọtụtụ ngwụcha, mana nha na mbupụ na ihe niile ha nọ bụ maka ụgbọ ala ndị a, ha na-anya ha ka, yabụ ọ bụ ugboro iri na asatọ iteghete gbakwunye 35 , ọ dị ka otu ụzọ siri ike. Ha dịkwa oke ọnụ, ha nwere usoro ịghasa ziri ezi maka ihe niile. Ma maa ihe, ha na-abịa na ụfọdụ ezi nha na a ole na ole ezi risịrị - Ee, Echere m na ị nwere ike nweta ndị maka Lekwasịrị Anya ST kwa.
Otu ozo di na radar maka Focus. Ma ọ dịka otu ụkwụ wiil maka $ 7,800. Ee, dị oke ọnụ.
Nnukwu igwe kwụ otu ebe na-achọ ọfụma. M na-ahụ ọtụtụ n'ime ha ka ha na-egosi na ebe anyị na - edebe akwụkwọ - dị ka ụbọchị niile. - Oge n'aga. - Ọ dị mma, anyị ruru ọnụ ọgụgụ 12, abụghị ndị na-eto eto ma, anyị nwere F1R F103.
Ubé busier imewe na nza nke spokes. See hụrụ ọtụtụ n'ime ha, ha na-abịa na nnukwu nha. Ahu m ka ewepuru ha na Volkswagen GTIs na ihe ndi ozo.
Ndị a bụ nhọrọ dị oke ọnụ, oke igwe kwụ otu ebe iji banye. Ga-ahụ ha na 350Z n'ihi nnukwu ibu ha, G35s .- Ee, ha masịrị 19 na 20s.
Ha mara ezigbo mma - agaghị m ekwu na ha nwere ụdị egwuregwu, ha na-adịkarị okomoko ma ọ bụrụ na nke a bụ anya gị ịga, nke a ga-abụ nnukwu nhọrọ maka gị. Mana sọsọ ọnụahịa ha nwere mere ka ha dị elu na ndepụta a. - Kpom kwem, dị ike nke iri na otu, anyị nwere Konig Dekagram.
Nke a bụ otu nke anyị hụrụ na ndepụta ahụ maka afọ ole na ole gara aga naanị n’ihi na ọ bụ igwe kwụ otu ebe a ma ama. Ugbu a, nke a bụ ọnụ ọnụ, egwu sitere n'ike mmụọ nsọ. Ugbu a, ọ dị mma maka ọtụtụ ịmechi breeki, dị ka anyị.
Ọtụtụ ndị ịnyịnya ígwè Konig na-amasị m nke ukwuu, nke ahụ bụ ihe ha mere ha. Ọ bụ otu n'ime wiil ha ka emepụtara, yabụ ha nwere hypergram, ihe osise, gram ọ bụla ị maara - Instagram - Instagram ihe ọ bụla ọ bụ. Ma, ọ bụ igwe na-asọ asọ, yabụ ọ dị mma ịbawanye ike, elu dị ezigbo mma.
Ha bụ igwe kwụ otu ebe siri ike. - Kpamkpam. - Ha na-eme ihe ha kwesiri ime ma ha na-eme ya nke ọma.
Ma maa ihe, ọ bụ na ọzọ oké ọnụ igwe kwụ otu ebe oke. E nwere ihe a na-emekarị ndị anyịnya igwe a. Ihe ruru $ 800 maka otu anọ - Damn, yabụ n’okpuru nnukwu mmadụ - Ee - Damn (beeps) hụrụ gram, nke ahụ bụ ihe m na-ekwu. (ọchị) - Gaa na nọmba 10, anyị nwere JNC JNC005.- Nke ahụ bụ ire okwu. - Ee, na nke ahụ bụ igwe kwụ otu ebe nke anyị na-ahụ oge niile bụ igwe kwụ otu ebe kachasị ewu ewu.
Ọ bụrụ na anyị abanye n'elu iri, nke a bụ Wheels ị nwere ike ịhụ ezigbo ebe niile. Na JNC005 abụghị isịneke ka ndị ntụgharị anya na-enweghị multi-akụkụ price. Echere m na ọ bụ ya mere na ọ bụ ogwe osisi a ma ama - nke ahụ bụ ebe ere - ee ndị na-abanye n'ime egwuregwu ụgbọ ala, ọbụlagodi ụfọdụ ndị nwere ụgbọ ala ha obere oge, soro ndị wiil ahụ gaa, ha dị oke mma, ha dị oke ọnụ .
O yikarịrị ka ị ga-ahụ nke a n'ọtụtụ ihe ngosi akpaaka. Naanị n'ihi ọnụahịa ahụ bụ n'ezie Enkei RPF1.- Oke oke, nnukwu ọnụahịa.
Ọ dịka Enkei flagship ịnyịnya ígwè, onye ọ bụla maara RPF1, ọ bụ ya mere o ji dị na ndepụta ahụ. Ọ ghaghị ịnọ ebe a, ịnweghị ike ịgabiga ya nọmba 8, anyị nwere otu ọkacha mmasị m, enwere m mmasị na igwe kwụ otu a. Ọ bụ Mmetụta Ọrụ D9R. - Aị! - Ya mere, wiil a bu ihe di egwu.
Ọ ga-adị ike na nnukwu ego abụọ ndị a dabere na nha nke wiil ị ga-eso. Mana ị nwetara aha Ọrụ, ị nwetara ogo ọrụ, ọ dị ka ọ dị mma. Ha na-eme ụfọdụ agba agba dị jụụ maka wiil a, dị ka ọ dị mma.
Nke a bụ otu n'ime ọkacha mmasị m n'onwe m na ndepụta ahụ - Kpomkwem - will ga-ahụ ya n'ụgbọala ndị na-egosi akpaaka maka na ị nwere ụkwụ ụkwụ gị nke mbụ, nke wiil nke abụọ, ma ọ bụ ikekwe nke gị tingnweta usoro nke atọ nke wiil ahụ ga-abụ Mmetụta Ọrụ D9Rs. - Ma ọ bụ ihe dị na usoro ndị ahụ. - Ee kpọmkwem. - Ya mere, mgbe anyị banyere n’ịgba ụkwụ nke asaa, anyị hụrụ eze ọzọ ka ọ na-abata.
Yabụ nke a bụ nke anyị kwurula na mbụ - Yep - Yabụ nke a bụ Konig Ampliform. Yabụ nke a bụ wheel ọzọ nke Konig Flowform, ọ bụ ìhè, nwee ezigbo mmecha, ụdị dị mma, ị nwere 18s, 17s, ha na-eji ọtụtụ ihe ọ bụla aga, ha na-elekwa anya nke ọma na ihe ọ bụla. Have nwere ezigbo ọla kọpa, ikekwe ọkacha mmasị m kachasị mma - ee, ha dị mma - na ị maara n'eziokwu na eze na-eme ya.
Ha na-eme ya nke ọma, ha na-eme ọfụma. Ọ bụ ya mere ị ji nọrọ na ndepụta ahụ. Ya mere, ka anyị gaa nọmba isii, anyị nwere ESR SR08.
Nke a jiri bụrụ otu n’ime isi anyị chere na ọ bụ n’afọ gara aga ka ọ bụ nke anyị? Nọmba otu? - Ee, ọ nwere ike ịbụ n’ebe ahụ. - Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụ ụzọ. Mana nke a bụ nhọrọ dị oke ọnụ ma ọ dị mma nke ukwuu.
Mgbe ị ga-abanye na wiil a, ọ dị ịtụnanya. Ihe kpatara na ọ na-akwada bụ ESR dị mma ga-esi pụọ n'ọdịdị ahụ wee gaa maka anya ha pụrụ iche nke dị mma ịhụ. Ya mere, anyị kpaliri ya ntakịrị, n'ihi na ESR ga-agbanye obere obere, anyị nwere ike belata ntakịrị ịlele ma lelee ihe ọhụrụ sitere na ESR - Ee, lekwasị anya na ESR n'afọ a, ha na-eme ụfọdụ ihe dị mma .- Kpamkpam.- Ha wee na ha onwe ha aghụghọ, ha agbawo nsụgharị nke ha multi-mpempe ibe nke wheel na-apụta.
Ọ mara mma nke ọma - mana ehi ụra na SR08, ọ bụ nnukwu igwe kwụ otu ebe maka nnukwu ego - ọ bụrụ na ịga igwe kwụ otu ebe na ise anyị kụrụ akara 5 kacha elu. Anyị nwere AVID1 AV6, nke a bụ igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ, ugbua - ee - ikekwe ihe kpatara o jiri dị elu - ee, o doro anya ihe kpatara o jiri nọrọ ebe ahụ - eleghị anya ihe kpatara anyị ji ahụ ya mgbe mgbe, mgbe I mere ndepụta ahụ. Asaa kwuru imewe nwere egbugbere ọnụ nke na-egosi ọmarịcha ihe ọ bụla.- Yep.- know ma na enweghi otutu ihe enwere ike ikwu gbasara AV6.
Ha nwere ọtụtụ ngwụcha n'ihi na ọ bụ Avid1. Ha nwere ọtụtụ nha n'ihi na ọ bụ AVID1. Ma ọ dị ọnụ ala n'ihi na ọ bụ AVID1 - Kpọmkwem - Yabụ na ọnụọgụ anọ, anyị nwere AVID1 AV20.
Ya mere, nke ahụ ga-adịkwa ebe niile. Dịka ị pụrụ ịhụ, AVID1 dị elu na ndepụta ebe a n'ihi na ha dị oke ọnụ. Ha bia na otutu agba agba.
Nke a bụ nnukwu oghere nkedo site na AVID1. Ọ dị oke mma na ị ga-ahụ ndị a n'ọtụtụ ụgbọ ala dị iche iche, ha na-enye ọtụtụ usoro bolt dị iche iche. - Ee, WRX dị ọtụtụ, Civics, m na-ekwu na ọ bụ ihe niile. - Eeh. - Ọ dị mma, ya mere na nke kachasị elu 3 anyị nwere ụfọdụ ezigbo atụ nke igwe kwụ otu ebe anyị atọ nọ ebe a.
Yabụ nke a bụ Aodhan DS07, ugbu a nke a bụ igwe kwụ ọtọ ọzọ, igwe kwụ otu ebe. O doro anya na ị ga-ahụ ihe kpatara nke a ji bụrụ igwe na-ewu ewu nke ndị mmadụ na-ele anya na ha dị, mana ọ bụ igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ. Get nweta Lippe ndị ahụ, gị na ụmụ okorobịa a nwere egbugbere ọnụ miri emi - Onye ọ bụla chọrọ wiil dị iche iche, mana ka anyị gbadata ya, ha na-ada ọnụ.- Ọ gwụla ma ị na-azụ ndị ejirila ma chọọ ịchọta oke kwesịrị ekwesị maka ha ma ọ bụ mee ka ha gbanwee.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe maka narị ole na ole dollar- Kpọmkwem.- Nke ahụ bụ ihe ndị mmadụ na-eme.- Kachasị, dị mfe ịbanye na egwuregwu ahụ.
Want chọrọ ụfọdụ ịnyịnya ígwè anyịnya igwe. Na-eriju afọ na ọkọlọtọ anyịnya igwe. Ga-enweta ihe na ya.
Nke a bụ igwe kwụ otu ebe ị ga - ahụ ebe niile n'ihi na ọ dị mma, ọ bụ ihe ama ama - N'ịga n'ihu na ọnụọgụ abụọ, anyị nwere Rohana RFX11. Nke a bụ igwe mara mma.- Naanị ihe m nwere ike ikwu bụ na m hụrụ igwe kwụ otu ebe n'anya.
Ọ bụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị m.- Nke a bụ n'ezie na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche si ikpeazụ bike anyị lere anya. Nke a bụ ebe ị ga-enweta obere ọnụ.
Mana ndị nwere ike imefu ya na-eburu igwe kwụ otu ebe n’ihi na ọ dị mma. Nke a bụ karịa nke okomoko gị, ị maara. Ọ bụ ezie na ha dị oke ọkụ.
Ha dị arọ maka ihe ha bụ, ibu buru ibu, yabụ ị ga-ahụ ọtụtụ n'ime ndị a gburugburu 20-inch nha na ihe ndị yiri ya - ihe kpatara nke a bụ nọmba abụọ na ndepụta a bụ n'ihi na ụgbọ ala na-ebuwanye ibu. Anyị na-ahụ ụgbọ ala ndị a buru ibu nke na-amalite ịbịa dịka ngwụcha 2010, ngwụsị 2012, - ndị mmadụ eruola ogo. - Ndị mmadụ na-abanye n’ụgbọ ala n’ihi na ha ga-enwetacha ego.
Ha na-ejide ụgbọ ala ndị a dị ka BMW, Audis, ihe ndị dị otú ahụ. -Mercedes. - Mercedes.
Ha na-enyekwa ihe ndị dị ka Mercedes. Amaghị m ma ọ bụrụ na ịmara, ha dị ezigbo egwu - ee, ha dị, ha dị ịtụnanya - ha gbakwunye 43 na ụmụ okorobịa a zuru oke. Ya mere, na Rohana RFX11, nhọrọ dị oke egwu.
Emechara ihe ndị Rohana nyere bụ nke ụwa a - ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na wiil ndị a, ha dị ịtụnanya - ndị a bụ ụmụ nwoke buru ibu 20x12 - mana n'eziokwu na ha adịghị arọ. Mgbe ị hụrụ wheel a, ị na-atụ anya na ọ ga-adị arọ naanị n’ihi nha ya. Ma ọ bụghị ihe ọjọọ maka ihe ọ bụ. - Ee e, ọ bụghị. - Ìhè. - Ya mere, price n'etiti, ị na-achọghị n'ezie imebi akụ, ma ị na-ahụ ihe karịrị iri na ise na narị ise maka a set nke ya.
Ma n'eziokwu, ọ dịghị njọ ma ọlị maka ihe ị nwetara. - Ọ bụ ya. - Ọ bụ ya. - Daalụ nke ukwuu maka ịnọgidesi ike.
Anyị mere ka ọ bụrụ onye mbụ. Nke a bụ wheel anyị na-atụ anya ka a hụ nke kachasị na 2020. you dịla njikere? - became ghọrọ onye a ma ama. - I mere ya.
Cosmis Racing XTR-206.- Ahụrụ m ịnyịnya ígwè ndị a n'anya.- Ha dị egwu.- Ekwuru m ya na afọ gara aga, ha dị ntakịrị ala na ndepụta anyị, anyị na-ahụ ka ha na-agagharị dị ka Cosmis im Na-ewu ewu karịa afọ.
Ahụrụ m igwe kwụ otu ebe a n'anya. Ọ bụkwa otu n'ime ọkacha mmasị m na ndepụta ahụ. - Ee, dịka m kwuru, Cosmis na-egbu ya site na njedebe ha kwa.
Ha nwere ọbara ọbara, ha nwere oji, ha nwere ọla kọpa, ha na-acha ọcha, ha nwere ọlaọcha, ha nwere polish, ha nwere uhie uhie, ha nwere oji na igwe, ha nwere ihe niile. Know maara ihe, ha dịkwa mma ọnụ dị ka otu puku dollar, obere ihe karịrị otu puku, dabere na nha na ihe ọ bụla ị na-ewere. Ma n'eziokwu ihe ndị a na-etinye ya n'ụzọ zuru oke na ụgbọ ala ọ bụla ha hapụrụ.- Otu ihe m ga-ekwu ọ bụ ezie, na-eme ka mgbatị ahụ dịkwuo mma na wiil ndị a.
Maka na ozugbo ị ruru ebe a, ị ga-enwe nnukwu mbibi na ị nweghị ọtụtụ egbugbere ọnụ ma ọ bụ concavity fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị ga-agbanye na wiilị dị ala na ndị a, mana m hụrụ wiil ndị a n'anya. - Ma ebe ahụ ka ọ dị, ụmụnwanyị na ndị nwe anyị, ndị a bụ wiil anyị kachasị elu nke 20 maka 2020. Ihe anyị chere na anyị ga-ahụ ọtụtụ n'ụgbọala, ebe ahụ na ebe ahụ, na gallery anyị ihe ọma ndị a niile na 2020 na n'ọdịnihu.
Daalụ maka ikiri. Enwere ike ịchọta igwe kwụ otu ebe anyị kwurịtara maka n'abalị a na weebụsaịtị anyị Fitmentindustries.com, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụtakwu ihe banyere ha, lelee ha, lelee ha n'ụgbọ ala gị, gaa na gallery ahụ, tinye ya, ụdị ihe ọma niile .- Ma ọ bụrụ na e nwere igwe kwụ otu ebe na ị ga-echerịrị na ị kwesiri ikwu okwu na ndepụta nke igwe kwụ otu ebe kachasị ewu ewu na 2020. - Kpamkpam.- Ya mere kwuo okwu n'okpuru.- Ọ dị mma ya mere daalụ maka ikiri, echefula ịdenye aha, lee Gi mechara.
Kedu ụdị wiil anọ?
Iheụdị wiil dị iche ichegụnyere ncharawiil, alloywiil, esorowo na ihe nkedowiilna chromewiil.Sep 6 2019
(Cheers) - Nke ahụ bụ ihe kachasị ọsọ m hụtụrụla. Ahụbeghị m ya ngwa ngwa a kemgbe bọọlụ. E nwere ụdị ihe dị iche iche na egwuregwu wiil, nke pụtara na ọ ga-abụ na ị hụrụ meme ebe ha na-ekwu okwu banyere Hella Fail na Hella Flush na Stance na Dropped na Slammed na Maxi.
Amaghị m, e nwere aha ndị a niile dị iche iche, mana ọ bụrụ n’eziokwu na i kwatuo ya enwere ụzọ anọ dị iche iche nke igwe kwụ otu ebe. Anyị kpebiri ịgwa gị maka ya taa maka na dịka ụlọ ọrụ anyị na-eme ihe dịịrị anyị. Mmepe Mmepe, nke ahụ bụ plọg.
Tupu anyị amalite, echefula ịdenye aha, anyị na-anwa ịgbada otu narị puku ka anyị wee nwee ike ịga n'ihu na isiokwu dị mma dị ka nke a biko biko nyere anyị aka site na ịbịaru ebe ahụ. Na n'ezie, ọ bụrụ na ị na-achọ wiil, ike nkwusioru isi niile ruo Fitment Industries dot com, mana tupu ihe niile a, ị ga-apị n'akụkụ nke ọzọ, anyị na-enweta ọnụ ọgụgụ. Ya mere, ụdị ihe eji ebu ụzọ bụ Tucked.Tucked Fitm bụ mgbe wheel na taya ya na ihe nkwụsịtụ na-anọdụ ala n'ozuzu n'ime ihe eji emepụta ihe.
Ugbu a ị nwere ike ime nke ahụ na fend ma ọ bụ azụ ahịa mgbe ahịa gachara mgbe ndị mmadụ mehiere. Ma n'ezie, ihe nkpuchi zoro ezo bụ ihe dị na ọdịdị, ọ bụkwa ihe mara mma, nke ọma, nkịtị. Ihe ezoro ezo bụ ihe ọtụtụ mmadụ na-eme dabere na ọnọdụ ha na-ewu ụgbọ ala ha, nke na-ada ụda ntakịrị mgbe ndị na-eto eto na-eche banyere ya.
Mana nke a bụ 'Ihe m bu n'uche na nke ahụ, ọtụtụ mmadụ ga-eme mgbanwe zoro ezo maka ebumnuche abụọ. Ma otu na ha ịghasa elu ma ọ bụ abụọ ha na-eme ya maka nkwusioru ikuku. Ugbu a, nhazi zoro ezo bụ ihe a na-ahụkarị na ụgbọ ala nkwusioru ikuku na-achọ ndozi zoro ezo.
Ọ na - emekarị ka ụgbọala ahụ saa mbara, na - ele anya karịa, ma mgbe ọ nọ n’ala ọ ga - adị mma n’anya. Ma ihe eji eme ihe na-ebutekarị na nhazi ma ọ bụ nkwụsị ka ha na-anwa ịkwado wiilị na wiil. N'elu nke a, ikwesiri icheta na ọ bụrụ na ị nwere ntọala zoro ezo ị ga-achọkarị wiilị dị elu karịa ka ọ ga-etinye wiilị ahụ niile n'ime fenda ahụ. ma ọ bụ ụgbọ ala na-emepụta ihe, na-elekarị anya na profaịlụ dị larịị.
Will ga-ahụ nke a n'ọtụtụ ụgbọ ala dị iche iche, ọkachasị na mpaghara 45 ruo 55, ma Zoro ezo bụ ihe a na-ahụkarị na ị ga-ahụ ya na ikuku ikuku. Gaghị ahụ ọtụtụ ndị na - eme ntọala zuru ezu na coilovers, mana ị ga - ahụ oge ụfọdụ mgbe ndị mmadụ mehiere na ndozi ha na - eji gallery anyị. Mee ka ndu anyi di nfe, mee ka ndu gi di nfe.
Anyị ekwesighi ịnabata ozi-e sitere na email gị zitere anyị na-ekwu na ị ghabere ụlọ ọrụ ahụ ị chere na ọ ga-agba agba. Naanị m ga-abanye na nke ọzọ. Mbido zoro ezo chọrọ ka ị mara ihe ole na ole.
Ugboro ugboro ị ga-atụgharị ihe ndozi gị. Ugboro oge ma ọ bụrụ na ịmaghị na ị nwetara ọla ahụ ma ọ daa, mana ọ naghị adaba ihe ịchọrọ karịa mgbe ị banyere nkwụsịtụ ikuku nke ị maara ma ọ bụrụ na ịnaghị edozi nke a ị ga-emecha banye taya gị. Ọ na-achọ ka ị ghọta na ọ ga-abụ na ị ga-achọ igwe dị warara dị warara ma na profaịlụ ngosipụta dị larịị ka ihe niile wee nwee ike dabara nke ọma n'okpuru.
Mana n'ezie n'ezie ị ga-abanye n'okwu esemokwu, ọkachasị na ngwongwo nkwusioru, ihe bụ ụdị ntọala nke kachasị, mana mgbe emechara ya, ọ dị oke mma. Echere m na ụdị ntọala a zoro ezo dị oke mma n'ụgbọala nkwusioru ikuku. Ọ bụ dị ka a nta egwuregwu kọmpat, ihe dị ka Audi TT anya nnọọ gory na a zoro ezo owuwu ke Ugbu a, ọtụtụ ndị ga-arụ ụka na ya nwere ike kpọkọtara na wheel naanị, na taya naanị, ma ọ bụ na wheel na taya ọnụ, ma na anya anyị na-ahụ na wiil ahụ dum ga-adị n'ime fenda ahụ, ma eleghị anya otu n'ime ntọala ndị ọzọ na-ewu ewu bụ ndozi iwepụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị chere na ọ dị na fenda ahụ mgbe ị wụnye ya, ịnwere ike iche na nrụnye ahụ dị na ọkwa anya ya na fenda ahụ. Dị ka m kwuru, ọtụtụ ndị na-arụ ụka, ọ bụ? bụ iwepụ ntọala? Ga - ahụ ndị na - ese foto nke dabara adaba ha ma wepu aha ya ma ọ naghị arụ ọrụ. Ndị mmadụ ga-ekwu na ọ bụ wiil ma ọ bụ taya mgbe ọ bụ n'eziokwu ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ị na-eme ntọala iwepụ, wiil ahụ ga-adaba na fenda ahụ n'ụzọ zuru oke.
Iwepụ iwe na-enye ụgbọ ala gị ihe eji edozi meatier maka etu esi ele anya ọkachasị n'ihi na ị nwetara ntọala ahụ, nke ahụ gbanwere ntọala ya na wiil ya na taya ya. Taya na-enyere aka nke ukwuu na-enye ya a iwepụ anya mgbe ị na-ele ya, na ọ bụ eleghị anya, otu n'ime ihe ndị kasị setups ma ọ bụrụ na ị na-achọ a track dabeere ma ọ bụ n'ezie ojiji maka gị wheel arịọnụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ebugharị ihe nhazi nke anụ ahụ na nke ahụ na-achọkarị ka wiil ha ka ụgbọ ala ahụ gbasaa, nke ọma mgbe ị na-agba ọsọ nke ọma, enwere ihe ole na ole ị ga-atụle ma anyị nwere ike ịsị na nke a siri ike karị iru karịa akpa gị. akụrụngwa.
Ihe mere anyị ji kwuo nke a bụ na ọ na-achọ obere mgbakọ na mwepụ. Ewela iwe na anyị, mana nke ahụ bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ugwu dị iche iche, kwuo okwu nke millimita ma ọ bụrụ na ị nwere milimita ya, ịzụrụ akụkụ akụkụ na-ezighi ezi maka taya gị nwere ike imebi ọhụụ ahụ na -emechakwa anya.
Ọ bụrụ na ị na-eji nkwụsịtụ nkwụsịtụ na wiil nke nwere taya taya, ọ ga-adị gị ntakịrị anya - ịkwesịrị ịnọ na nkwanye ikuku mgbe ị na-anọghị. Ihe nwere ike ịbụ otu n'ime anya kachasị amasị m na ihe anyị kacha eji ọtụtụ ụgbọ ala, mana ọ bụ n'ezie ihe a na-ahụkarị maka egwu ahụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe na-arụ ọrụ ahụ kachasị mma ọ nwere ike, ịba ụba taya gị dabere na obosara ụkwụ gị bụ ihe ha kọwara na isiokwu ọzọ otu esi agbakọ mgbatị taya, ị maara anụ, ị nwere ike ịme isiokwu ahụ, M chee na o ga adi ebe ahu.
Nke ikpeazu, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ga - eburu ohere oghere nwere ike ịnwe na taya gị, iwepụ ọkụ ga - enye gị ego kachasị mma maka ego gị, ọ ga - eduga gị n’ihe ga - eme ka ụgbọ ala gị na-eche mma, na gị nnọọ ole na ole ugboro ga-enwe ike enlaring gị ike nke ukwuu nke na ị na-amalite ida ida traction ụzọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ a iwepụ Mbido Ọ dị mma, ọ bụ nnọọ uche-boggling na n'otu oge ahụ ọ ga- nwere ike ime ka arụmọrụ dịkwuo elu, ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ịchọrọ. Ọfọn, ụfọdụ ndị anaghị, nke ahụ dịkwa mma. Anyị ga-abịa na ụdị nke atọ nke ngwaọrụ, nke bụ a okuku ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ịmaghị, nke a nwere ike ịbụ ihe ọchị na-agba ọsọ maka ọtụtụ ndị na ọ bụrụ na ihie ụzọ na ntọala gị, ị ga-enwe nsogbu, na mgbe ụfọdụ ọ bụ eziokwu. Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-emejọ ihe ha na-eme, ha na-ejedebe na wiil nke na-ewepụta ọkara nke anụ ọhịa karịa ọkara nke anụ ọhịa ahụ n'ime ahịrị ụkwụ ha. Ma Poke Fitment n’ezie nwere ntakịrị akụkọ ihe mere eme na akụkọ ihe mere eme n’azụ ya.
Na warara warara enwere otutu ndi mmadu dika nna gi ma obu nna nna gi nke mechara buru ugbo ha puo na egwu, gbanwee ugbo ala azu wee chigharia warara ahu ubochi nile - mmadu ole na ole n’ime ha Enwere iwu gbasara otu ibu ibu. N'azụ ụkwụ nwere ike ịbụ na mmekọrịta gị na fend gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-anya ya ọchị. N'ihi ya, ndị mmadụ malitere ịnyagharị na wiil ndị sara mbara karịa, ma n'ihi ụzọ o si rụọ ọrụ, wiil ndị ahụ apụtakwuola. na karia.
Ka oge na-aga, otu onye mechara nwee ahịa ụlọ, nke mere ka ọ bụrụ ihe na-akpali mmasị maka wiil ndị sara mbara karị n'azụ ma maka ebumnuche na ịrụ ọrụ. N'ikpeazụ, ọnọdụ ụgbọ ala ahụ na-ewere ọnọdụ na ha dị ka nke ahụ, ọ dị ezigbo mma, naanị m na-eme nke ahụ n'ihi na enwere m Camaro na achọrọ m ime nke ahụ. Ma ọ bụ m nwere Mustang na m chọrọ ime nke ahụ.
N’ikpeazụ, ọtụtụ ọnọdụ egwu na-esite na nke ahụ apụtaghị na ọ bụghị na mpaghara ndị ọzọ n’ihi na onye ọ bụla na-ewe iwe mgbe anyị gbalịrị ịkọ ya na otu obodo. Ma ike gwụrụ nke ọma nwere oge ọ kacha mma, ọkachasị na ọnọdụ ụgbọ ala akwara, na nke ahụ bụ ihe ndị mmadụ na-enwe mmasị ịme dị ka ịme ezi ihe kpatara ya. Mana ndenye poke bụ ihe ịtụnanya.
Yabụ ị ga-ele ya anya, kwa n'ụdị ụgbọ ala dị iche iche. Ugbo ala VW na-enwekarị ihe kwesịrị ekwesị mgbe emechara ya, ọ na-adịkwa okirikiri. E nwere ụdị ndị ọzọ dị iche iche na-amasị ụdị poke fitment style n'ihi na ọ na-enye ha ihe ike ike anya na m Datsun ozugbo na m chere na ọ bụ n'ezie oyi mgbe ahụ na-esote oge m mere otú ahụ ka m nwere na mydiamon Racing Steelys na-ere ihe dị ka iri asatọ dollar ọ bụla.
Ọ bụ ezigbo oge. Egwuregwu poke bụ ihe dịtụ iche n’ihi na ọ naghị achọkarị mgbakọ na mwepụ. Mgbe ị na-ele anya na nrụrụ gị, ị na-adịkarị obere karịa nke a tụrụ aro, nke ga-emeghe wiil gị.
Mana oge ụfọdụ ị ga-echikota ngwa ngwa gị ma ọ bụ ile anya obere ihe ma ọ bụrụ na ịmeghị ya. Ugbu a, mmezi poke na ụfọdụ ụgbọ ala akwara na-adị mma ma ọ bụrụ na ịlele nhazi kwesịrị ekwesị. A obere poke emeghị onye ọ bụla nsogbu ọ bụrụhaala na i nwere nkwusioru mmiri nke ga-n'ezie na-ala ụgbọ ala gị si smashing gị taya na-ebibi gị fenders n'ihi na ọ bụrụ na ị nwere a ngwaahịa arụzi ụgbọala ị nwere a ngwaahịa nkwusioru na ụfọdụ ụdị poke fitment na ụgbọ ala gị na-jiggling niile ebe na ị na-amalite ya n'ihi na ị chọrọ ịga a carat na ọkụ, ị nwere ike na-akwa ha na gị na taya na ọ bụ naanị na-atọ ọchị.
Ugbu a ị nwere ike ịnọ na-eche ebe onye nke anọ nọ, ọ ga-abụkwa na ọ bụ nke kachasịkarị ugbu a. Nke ahụ bụ ihe anyị na-akpọ nkwụnye mgbanwe. Ka ọ dị ugbu a enwere ike ugbua ndị mmadụ na ngalaba nkọwa a na-ekwu maka na nke a abụghị okwu okwu ziri ezi yana na ọ ga-abụ domed, hella iwepụ, ma ọ bụ hella daa, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ bụ nke otu ụdị ahụ na nke ahụ bụ mgbanwe ngbanwe.
Ugbu a ndozi ukpụhọde dabeere mara mma nke ukwuu niile nke atọ ndị ọzọ na okwu nke ukpụhọde dị iche iche wheel obosara iji nweta a dị iche iche ịke, ma ihe postcho nke ọzọ nwere? ụfọdụ enweghị ebumnuche ịchọ mma karịa naanị ebumnuche arụmọrụ ma n'otu oge ahụ malite igwu ọtụtụ ihe na atọ ndị ọzọ achọghị ezigbo ịmara etu Dodge Hellcat si nwee agwa bụ eziokwu ma G35 na iri na abụọ na ọkara obosara, ị maara, echiche 1C nke 003s nwere àgwà na nke ahụ bụ ihe dị iche. Cargbọ ala ọ bụla nwere ike inwe agwa, mana ọbụghị ụgbọ ala ọ bụla nwere agwa. Kedu nke dị egwu mgbe m kwuru ya n’olu dara ụda, mana ọ bụrụ n’ịhụla isiokwu dị n’etiti ihe ọ juiceụ juiceụ na ihendori, ị ga - enweta ya.
Mgbe ị na-elele akụrụngwa, egwuregwu mmegharị ahụ, ị ​​na-ele ihe dịka ọdịda, ịdọkpụ, omume, ịkwọ ụgbọala. I lere anya nkwusi ikuku, ị na-ele akụkụ nke ihe dị iche iche iji hụ na wiil ndị ahụ dabara nke ọma. Anyị na-ekwu banyere nke a n'oge gara aga, mana ọ bụghị ụgbọ ala ọ bụla nwere ịnwe ụlọ ọrụ iri na abụọ.
Ọtụtụ n'ime ya bụ naanị obere ọdịda daa t gbanwee ihe niile ịchọrọ ime. Ma ọ bụrụ na ụgbọ ala nwere ọnọdụ ziri ezi, mgbe ahụ ị ga-ahụ ụgbọ ala a mere nke ọma. Mana ọ bụ otu n’ime ụdị uwe kachasị sie ike ịbịa.
Na-amalite ihe dịka mgbatị, dị ka camber, dị ka akụrụngwa nkwonkwo iji mee ka igwe kwụ otu ebe a dabara. Ugbu a ị nwere ike iji dị ka Camber Gang na ihe ndị ahụ niile gụnyere ịgụnye mgbanwe, mana enwere naanị ihe gbasara ọnọdụ zuru oke nke dị iche na ihe ọ bụla. Anyị na-ekwu okwu mgbe niile, nke ọma, ọ bụghị anyị, mana enwere ọtụtụ ndị na-ekwu okwu ọtụtụ oge megide imeghari ọnọdụ, mana ọ bụ otu ndị ahụ na-ele ụgbọ ala na Sọnde na ngosipụta akpaaka, nke zuru oke, ọ bụ ikekwe ka bụ onye kachasị ewu ewu na ndị mmadụ chọrọ ile anya.
Ọ na-ewekwa ọtụtụ ọrụ. Ọnọdụ mgbanwe bụ n'ezie ihe dị ntakịrị nzuzu. Na-asụ ogo dị iche iche na ihe dị iche iche n'ụzọ ị na-eme.
Kwesighi ichegbu onwe gị nke ukwuu banyere ile anya ma ọ bụ ọbụlagodi nke iwe. Poke fitment na-abụkarị ihe ma ọ bụrụ na ị nwere ụgbọ ala ụlọ ma ọ bụ ọ bụrụ na i mehiere nke ọ na-eme, ị nwere ike ịga ihe atụ ma ọ bụ zụta ụfọdụ ihe mkpuchi dị ka nwa anyị nwoke Jasper mere n'otu oge mgbe ọ dị sentimita anọ na ọkara. zụta. N'ihe banyere nhazi ndị ọzọ, enwere ndị ọzọ nọ ebe ahụ, mana ndị ahụ bụ ụdị omenala anọ kachasị dị iche iche ị ga-ahụ na obodo ruo ugbu a.
Yabụ ka anyị mara ụdị gia ị nwere na nkọwa ma echefula ịdenye aha. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọ bụla site na wiil, taya, na struts na Fitment Industries, anyị ga-ezute ma kelee n'ụlọ ntu AccuAir na Tuesday na 4 elekere.
Ọ bụrụ n’ịga SEMA n’ime izuụka ole na ole. Nwere ike izute m ma hụ etu ntutu m si dị njọ. Abụ m Alex si Fitment Industries, lee gị mgbe e mesịrị.
Ihe ndị na-acha ọkụ ọkụ na-enyere ọkụ gas aka?
Azịza ya enweghị usoro dị mfe iji chọpụta ya. Ọzọkwa, nsonaazụ nke ịga naanịwiil dị ọkụbụ ma eleghị anya pụtara obere (na-ekwu na ọ bụghị uru na-eme). N'ihi: 7% mmelite (+1mpgOgbodo 14mpg) na ọkwa obodo EPA.Ọgọst 16 2008
Ndewo YouTube, taa anyị biara ịgwa gị okwu banyere ma igwe kwụ otu ebe dị mkpa na m ga-abụ onye ọbịa gị. Nke ahụ dara ezigbo egwu, mana m bụ Alex si Fitment Industries na n'ihi obere, ọnụ ala nke ịdenye aha anyị na-aga Amaghị m ma ọ bụrụ na ịmara ma ọ bụ na ị maghị, mana anyị na-ahụ ya ọtụtụ ebe a na peeji nke igwe kwụ otu ebe mgbe ị nwere anyịnya igwe na yingzụ taya ma ọ bụ na-ekwu okwu banyere wiil na taya online, e nwere ọtụtụ ndị na-arụ ụka banyere ịdị arọ nke wiil na otú mkpa ma ọ bụ na ọ dị mkpa ọ bụ n'ezie. Y’oburu na ibu otu n’ime ndi ahu gha aru ugbo ala gi ka igosiputa ugboala gi, ogaghi acho ichoro ibu ahu.
Na-ekwu okwu ozugbo banyere ndị autocross ndị na-etinyesi ike na ọkara paụnd na ewepụrụ ha. Mgbe ahụ ị nwere ndị autocross ndị na-doro anya na-ekwu okwu banyere ndị na akpaaka na-egosi ndị mmadụ n'ihi na ha na-eche banyere paụnd ego ha nwere ike inweta ma ọ bụrụ na ha dị nnọọ nwetara a nkịtị Cosmis igwe kwụ otu ebe na a hypergram vesos, na mgbe ahụ na i nwere HPD kwa. Ndị mmadụ na-asị, 'Wow, ị na-agagharị na ọdụ ụgbọ ala na cones okporo ụzọ' anaghị eme nke ọma. 'Anyị kwesịrị ijide n'aka na anyị chebere oke ibu dị ka o kwere mee, nke nwere ike ịbụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke paụnd. 'Ma ọ bụ naanị otu nnukwu isiokwu na-ese okwu.
Anyị wee kpebie ikwu ntakịrị gbasara ya maka na enwere ọtụtụ akụkọ ifo na ihe anyị chere n’obere agbagọ iji nyere ndị ha na ha sere okwu aka. 'Gị banyere arọ igwe kwụ otu ebe. Ya mere, ka anyị kwuo banyere ya.
Ya mere, nke mbụ na ọtụtụ nkịtị kwesịghị banyere igwe kwụ otu ebe bụ na ị na-sprung arọ vesos unsprung arọ. Maka onye ọ bụla nọ ebe ahụ, anyị ga-edebe ya nke ọma, dị mfe. O doro anya na ibu dị, nke ọma, toro.
Featherweight bụ naanị ibu jidesiri na nkwusioru. Ndị mmadụ na-ekwukarị, sị, 'Ihe ọ bụla metụtara ihe nkwusioru bụ ibu gị buru ibu.' Chassis gị engine gị n'ime gị submarines na ihe niile N'elu nkwusioru gị bụ sprung arọ, mgbe ihe niile n'okpuru ma ọ bụ gị nkwusioru mmiri onwe ha bụ gị unsprung arọ.
Nke ahụ ga-abụ wiil gị, taya gị, diski breeki gị, ihe mkpuchi gị, ihe niile dị n’etiti. Ọfọn gịnị? Often na-ahụkarị na ịntanetị na ndị mmadụ na-anwa ịmepụta ihe a na-emeghị ka ọ ghara ịba ụba na oke ibu ọ nwere ike ịzọpụta gị site na ịchekwa paụndị na wiil gị nke ruru ihe dịka 15 pound nke ibu mgbe ọ gafere ihe nkwusioru gị. Ma nke ahụ nwere ike bụrụ akụkọ ifo kasịnụ. Nnukwu azịza nye ajụjụ a bụ (ịkpọ ụda) mba, ọ bụghị eziokwu.
Suspension ibu vesos unsprung ibu o doro anya na ọ dị mkpa n'ihi na gị nkwusioru ibu bụ ihe traction bụ na ukwuu Ọ bụrụ na ị atọghe a otutu nke gị sprung arọ na-adịghị na-nri àgwà ka itule ya na gị unsprung ibu, ị ga-enwe nsogbu na traction, na-atụgharị, na ndị niile na-atọ ụtọ stof iji jide n'aka na are na-ịnọgide na-enwe ziri ezi traction ụzọ, ma nke a bụ ibu fancy stof na ị chọrọ n'ezie ịma, ka anyị mara na ihe Ma ihe anyị na-agaghị ekwu banyere ebe a bụ ịmara na ebu ibu nke ọma bụ ihe ịchọrọ iwelata, n'ihi na mgbe ị nwere obere ibu, ị ga-enwe ọfụma ụgbọ ala ka mma. t sprung arọ tụnyere unsprung arọ, ọ bụ rotational uka. Ya mere rotational uka bụ kpọmkwem ihe ọ na-ada ka mgbalị, dị ka ọ bụ naanị a ọkọlọtọ arọ, ma ọ bụ static ibu dị ka anyị na-akpọ ya.
Yabụ ọ bụrụ na ị ga-ewere kilogram kilogram ma were ya kụọ eriri anụ ọhịa 12, ọ ga-abụrịrị obere ike ijide ọnọdụ ahụ na ọ ga-abụ naanị paụnd ijide. Thezọ kachasị mfe na kachasị mfe ịkọwa oke ntụgharị, amaara m na enwere onye na azịza ga-ewetara anyị nke a, naanị gee anyị ntị. Rotary ibu eleghị anya ihe kacha mkpa mgbe ọ na-abịa wheel ibu, n’ihi na site wheel arọ ị na-nnoo atụgharị wiil.
N'ụzọ bụ isi, ịdị arọ nke wiil ahụ, ka ị na-enwekwu ntụgharị, na nke ahụ nwere ike isiri gị ike. Ugbu a mgbe ị nwere wheel 32 paụnd ihe niile ga - esi ike n'ụgbọ gị n'ihe gbasara braking, ịkwụsị, ịnya ụgbọ ala, ụdị ike ọ bụla ị na - achịkwa, ị nwere ike ịsị ya nọrọ nke ọma n'ihi na ọ ga - abụ nnukwu ihe mgbu na Steelies Onye bụ 32 pound, 15 x 10s, na-enweghị ike sterịn, ị maara otú jọgburu onwe ya na ike ọ pụrụ ịbụ na-atụgharị n'ezie arọ wheel. I nwere ike ịjụ m olee otu m si mara.
Ama m n'ihi na m mere; echiche jọgburu onwe ya. Ọ dị mkpa iji uru a na-agbanwe agbanwe ma ọ bụrụ na ị na-anwa iwepụ ihe dị arọ na wiilị gị. Mana ya na ya enweghi ezigbo mmekorita.
See hụrụ, ịdị arọ na-agbagharị ga-eme ka ụgbọ ala gị ghara ịdalata, ije, ma ọ bụ tụgharịa n'ihi nzaghachi gị na nkuku, ọkachasị na njikọ gị. Ya mere ọ dị mkpa? Kpamkpam. Ma ihe ntụgharị bụ ihe ị kwesịrị ile anya n'ezie ma e jiri ya tụnyere ịdị arọ a na-atụghị atụ na nke a na-enweghị atụ na ihe niile, n'ihi na otu paụnd ruo paụnd 15, ma ọ bụ otu paụnd ruo paụnd atọ, ma ọ bụ paụnd anọ na paụnd 20. Ọ bụghị eziokwu.
Ma enwere oke maka ntụgharị ntụgharị iji chọpụta ego ole ị nwere ike ịchekwa na atụmatụ nke ihe niile, mana ọ ga-adị ntakịrị ntakịrị. Ihe ị kwesịrị ịma bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ibu na oke ntụgharị, ị kwesịrị ịkpụchasị ibu dịkarịsịrị site na oghere ahụ. Yabụ ịkwesịrị iji wiil ndị na-agba gburugburu na-arụ ọrụ ka wiil ahụ dị n'ihu site na oghere ehi.
Ihe na-agagharị na etiti ahụ ga-enwe mmetụta ka ukwuu karịa ịnwe ịdị arọ nke wiil dị nso na etiti ahụ, dịka nkedo gị. Ya mere, ibu arọ nke igwe kwụ otu ebe dị mkpa? Nke ahụ bụ nnukwu ihe ọtụtụ mmadụ na-ajụ. Azịza nye ajụjụ ahụ bụ ee.
Ma, ọ dị mkpa dị ka ọtụtụ? Mee ka ndị mmadụ kwere? Na azịza ya bụ mba. Igwe na-agbagharị agbagharị dị mkpa, ee, ibu ụkwụ ahụ dịkwa mkpa. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịkpụ paụnd ma ọ bụ paụnd na ọkara apụ na wiil gị, ọ bụ ihe dị iche n'etiti $ 1,200 na $ 2,400 na ị chọghị itinye uche na-etinye ihe niile n'uche.
Na 99% nke ndị mmadụ agaghị achọpụta ihe dị iche na ogo ha na-agba ịnyịnya ma ọ bụrụ na ha kpụọ ọbụna kilogram abụọ ma ọ bụ atọ site na wiilị, yana nke ahụ na wiil ọ bụla. Ihe ị ga - achọpụta bụ na ị ga - enweta obere nzaghachi, nke ahụ dịkwa mma, mana ọ gwụla ma ị bụ onye na - anụ ọkụ n'obi Track Autocrosser HPD, ị gaghị ahụ ya. Ga-enweta ọtụtụ draịva na oge echekwara ma ọ bụrụ na ị bụrụ onye ọkwọ ụgbọala ka mma.
Yabụ nke a bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ otu setịị wiil na ịdị na-agagharị agagharị abụghị nke ahụ, ị ​​nwere ike nweta ihe ịchọrọ. Ọ bụrụ n’ezie na ị chọghị ichegbu onwe gị maka ibu, ịkwesighi. Ma cheta, ọ bụrụ na i nwere ise, pou p nds maka wiil mgbe ahụ ị ga-amalite ịhụ ihe dị iche.
Ma atụla anya ụdị ụdị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ n'ihi na nke ahụ emeela ka anyị sụọ ngọngọ n'oge gara aga ma ọ bụghị eziokwu. Echere m na ị masịrị ya. Nke a bụ echiche anyị banyere ibu igwe kwụ otu ebe.
Mee ka anyị mara na ihe ndị dị n'okpuru ebe anyị ga-achọ ikwu maka nke ọzọ, yana ọ bụrụ na ị na-ele anya na wiil, taya, ma ọ bụ nkwusioru, lelee fitmentindustries.com. Anyị nwere 30,000 wiil, taya, nkwusioru.
Anyị nwere ihe niile ịchọrọ ịchọrọ Ọ dị mma n'anya. Anyi nwere gallery ka tinye kaadi gi na ihe ngosi a ma oburu na icho. Ma m bụ Alex si Fitment Industries.
Aga m ahukwa gi ozo, udo. Agaghị m atụfu ya n'oge a, onye!
Kedu ka m ga-esi mara ma rim m aluminom ma ọ bụ alloy?
Nchara bụ magnetik naaluminomabụghị, yabụ ihe ndọta ọ bụla ga-emegwaakụkọọ bụrụwiilị ahụ bụ nchara.Ọ bụrụmagnet adịghị arapara, mgbe ahụ, wiil ahụ bụaluminomma ọ bụ magnesium.
Ha niile bụ aluminom?
Ihe ka ọtụtụ n'imewiiltaa agbaalaaluminomalloy, nke pụtara na ọ wụsara wụrụ awụaluminomn'ime ebu.
Ihe mkpuchi dị mfe ọ na-eme ihe dị iche?
Ka anyị doo anya na nke a -ọkụ ọkụka mma. Agbanyeghị, nke a bụ nnukwu agbanyeghị,wiil dị ọkụagaghị-eme kaukwuuihe dị icheọ gwụla ma a ga-agwa ndị ọzọ nke ụgbọala ahụ okwu. E nwekwara obere mgbanwe na mbara igwe nke nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na arụmọrụ nke ụgbọ ahụ.
Ihe mkpuchi dị mfe ọ ga - eme ka ụgbọ ala gị dị ngwa?
Mgbe olekawheel na-agba ogho, inertia ya gaa n'aka ekpe gaa ije na-abawanye siteiheọsọnkewiil.Mkpa ọkụ wiil uchen'ihi nankena nwere ọtụtụ obere inertia nantụgharịna mma na nlọghachiỌsọ ọsọ.
Olee otu m ga esi mara ma rim bu OEM?
Lelee anya n’ime wiilị ahụ ma chọọ nọmba Oghere Usoro ahụ na akara njirimara ndị ọzọ. Tulee nọmba serial a na nchekwa data nchekwa nke akụrụngwa.Ọ bụrụha adabaghị, ha nwere ike ọ gaghị adịOEM; agbanyeghị, ụfọdụ bụ ọpụrụichewiilya mere ijide n'aka ịjụ gburugburu na online ụgbọ ala akụkụ forums ma ọ bụOEMụlọ ahịa ụkwụ.18.12.2018
Igwe aluminom ka mma karịa igwe?
Ha dị fechaa ma sie ike, na-eguzogide okpomọkụ nke ọma ma na-adọrọkarị mmakarịa nchara ígwè. Ha na-abịa dị iche iche nke imecha na nha.Aluminom ụkwụbụ ezigbo nhọrọ maka nguzozi nke arụmọrụ, ụgwọ, aesthetics, na agbara gas.
Enwere ike idozi ihe mkpuchi alloy?
NdoziAlloy Wịlị. Ihere, olulu e wuliri elu, na mgbochi dị iche iche ebibiwo ọtụtụalloy wiil, ma n'agbanyeghị nkwupụta nke ọtụtụ ụlọ ahịa taya,alloy wiilna-edozizi ugboro ugboro, ma ọ bụrụhaala na ha agbajiri ma ọ bụ gbajie.
Kedu ụdị wiil wiil GKN na-eme?
GKN Wheels bụ ụwa na - eduga ndị na - emepụta wiwi nke okporo ụzọ. Anyị na-enye ihe ngwọta na teknụzụ maka igwe gị iji nyefee - ihe ngagharị na mmegharị - iwe ihe ubi, ịkwaga ụwa, akụ m na ijikwa ihe.
Ebee ka m nwere ike ịzụta rim maka ụgbọ ala m?
Anyị nọ na-enye rim jikọtara ya na taya ndị a makwaara dị ka 'Wheel and Taia Package' kemgbe ịdị adị anyị. Zọ kachasị mma iji zụta wiil na taya maka ụgbọ ala gị, gwongworo ma ọ bụ SUV bụ ngwugwu Wheel na Taya.
Kedu otu nnukwu okpuru HED Belgium G?
Igosipụta 25mm dị n'ime, obosara mpụga 30mm, Belgium G rim na-aga n'ọkwa ọzọ nke 'obosara', ezubere iji kwekọọ ọtụtụ nhọrọ taya na ọnọdụ gravel. Atdị iche na mma - nke ahụ bụ ụkpụrụ HED.